ကော်ဗူးရှူတဲ့ လမ်းပေါ်က ကလေးငယ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကော်ဗူးရှူတဲ့ လမ်းပေါ်က ကလေးငယ်များ
Posted by နွယ်ပင် on Aug 24, 2011 in Copy/Paste, Myanma News, News | 20 comments
အခုမှ ကြားဖူးတယ် .. အထူးအဆန်းပဲ ..
အော် ဆင်းရဲချို.တဲ့ တဲ့ ကလေးတွေများကြတော့ ထမင်းမစာအောင် နည်းလမ်းရှာရတာပေါ့… သူတို.ကတော့ မူးရစ်ဆေးအဖြစ်သိလို.လုပ်နေတာတော့မဟုတ်လောက်ဘူးဗျ… တော်တော်ရင်လေးဖို.ကောင်းတယ် နော် လူငယ်တက်သစ်စလေးတွေ.. အခြေအနေမဲ့ပေမယ့် အဲဒီ ကလေးတွေထဲမှာ ထွန်းပေါက်မယ့်သူတွေလဲပါရှာမယ်နော် မြေတောင်မြှောက်ပေးမယ့်သူတွေမရှိတော့လဲ အင်းးးး… မိန်းကလေး ငယ်တွေလဲ ဒီလိုပဲ.. လူကြီးတွေကလဲ လူကြီးတွေပဲ ကလေးငယ်တွေကို အဲလိုတွေဖြစ်အောင် တွန်းပို.သလိုဖြစ်နေတာပေါ့… ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ ကလေးတွေကိုသာ သဲသဲလှုပ်လုပ်နေတာ
လမ်းဘေးက ကလေးကို တံတွေးနဲ.တောင်လှည့်မထွေးဘူး…..
ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အခြေနေမဲ့ သန်းကြွယ် အပိုင်း(၃၃)မှာ အဲဒါအကြောင်းပါပါတယ်။
အဲဒီကော်တွေက ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်တို့အီသနော ဘင်ဇင်း တို့ပါတဲ့အတွက် မူးယစ်ဆေး
လိုမျိုး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။
ကြားရတာ နားဝ မချမ်းသာစရပါပဲဗျာ..။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတော့ ဒါတွေမလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဗိုက်မဆာ ဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီ..။ ဒါပေမဲ့..။ မူယစ်ဆေးလို့ ရော မူးယစ်တွေဝေစေသလားဗျ..။
ကော်ရူတာကို ကြားဖူးတာ ကြာပါပြီ …. လူကြီးတွေ ရူတာပဲ သိတာ ။ အခု ကလေး တွေပါ အဲလို တွေ လုပ် လာကြတယ် ဆိုတော့ မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ ။ ဒီ့ထက်မဆိုးလာအောင် တတ်နိုင်သလောက် တားရမှာပေါ့။
ကော်ရူတာ မူးတယ်လို့ပြောကြတယ် …. ။ ကော်နံ့ ကြောင့် မူးလဲ သွားတာတော့ မျက်စိရှေ့မှာ တွေ့ဖူးတယ် …
ဟုတ်တယ် စုံစုံရေ နွယ်ပင်လဲ ဒီပိုစ့်လေးကို တစ်ခြားဆိုဒ်ကနေဖတ်ပြီး
စိတ်ထဲ တစ်မျိုးခံစားရတာနဲ့ မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ
အခြေအနေမဲ့ ကလေးတွေဘဝကိုတွေးရင်း တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်
တကယ်တော့ ဒီလို လူငယ်လေးတွေဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်အတွက်တော့ အရေးပါတဲ့ လူတွေပါပဲ ……..
ရန်ကုန်မြို့မှ ကော်ဗူးရှူတဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်များ
(ဓာတ်ပုံ The Voice Weekly)
ပုံတော့ပါတယ်……ကောမက်ထဲ တင်မရလို့ လေ…။
နွယ်ရေ…ဦးဦးမှောဆရာဆီ ကတော့ပုံပါထဲ့ ပေးထားတယ်…
နွယ်ပင်လည်း ပုံပါတင်ပေးထားပါတယ် မမြင်ရဘူးဟင် ………..
မကောင်းတာဆို ရှာကြံ ဖြစ်တယ်နော်
Japan မှာတော့ အလယ်တန်း အထက်တန်းအရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူအချို့ Tincture(အရက်ပျံ)ကိုဂွမ်းမှာဆွတ် ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီးရှူနေကြတာမြင်ဘူးတယ်
ဟိုမှာကတော့ဆင်းရဲလို့ ငတ်လို့ ရှူကြတာမဟုတ်ဘူး၊သက်သက်အပျော်သဘောနဲ့ဥပဒေလက်တလုံးခြား မူးယစ်ဆေးအနေနဲ့ရှူကြတာပါ၊
မြင်ရ တွေ့ရတာ စိတ်မသက်မသာ ရှိလိုက်တာရှင် …ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ …
ကော်ရှူတာကြာပြီလေ – နှစ်ပေါင်းကိုတော်တော်ကြာပါပြီ
မူးယစ်ဆေးလိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တအားရှိုက်ရှူလိုက်လို့ ခေါင်းထဲနောက်သွားပြီး ပြန်ကျသွားတဲ့အခါ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ခဏလောက်ဖြစ်သွားတာမျိုးပါ။ ဆက်တိုက်ဖြစ်ချင်ရင် ဆက်တိုက်ရှူပေါ့။ လက်တွေ့သိချင်သူများ လက်တွေ့ရှူကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တခါနှစ်ခါလောက်ရှူကြည့်လို့ အန္တရာယ်ဖြစ်မယ့်ပုံမရှိပါဘူး။
မြို့ပါတ်ရထားလမ်းဘေးတလျှောက်ပဲ လှည့်ကြည့်လိုက်ရင် အများကြီးတွေ့ရမယ်။
ဆင်းရဲတာ ထမင်းစားစရာမရှိတာနဲ့ ကော်ရှူတာနဲ့တော့ သိပ်မဆိုင်ဘူး။
ကျုပ်တွေ့ဘူးတဲ့ အထက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းဘေးက ရပ်ကွက်ထဲနေတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ဆို သူ့မိဘက စားနိုင်သောက်နိုင်ပဲ။ သူများတွေ ကောင်းတယ်ပြောလို့လုပ်ကြည့်ရင်း စွဲသလိုဖြစ်နေတာ။
အခုတော့ ဒီကောင်လေး ကော်ဆက်မရှူတော့ပါဘူး။ ဒါ့ထက်ကောင်းတာတွေ လုပ်တတ်သွားပြီ။
လူငယ်ဆိုတာ မိဘကပစ်ထားရင် ဒီလိုပဲ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရာဘာကပ်တဲ့ကော် ဥပမာ – စက်ဘီးဆိုင်ကယ် ကျွတ်ဖာတဲ့ကော်မျိုး ကိုသာရှူကြတာပါ။
အဲဒါရှူလိုက် အဖုံးပိတ်သိမ်းလိုက်နဲ့ ကော်တဗူးလုံးခြောက်ပြီး အနံ့ပြယ်တဲ့အထိ ရှူကြတာ။
ရေပိုက်လေးဘာလေးကွဲ ရင်ဆက်ဘို့ ကော်ဗူးတော့ အိမ်မှာဆောင်ထားတယ်
အခုမှ ကြားဖူးတာပါ.. ဒါနဲ့ မူးယစ်ဆေး လို ဖြစ်နေတော့ အဲဒါက စွဲတတ်လား။
အဲဒီ ဗူးတွေ အနံရရင် မူးကို မကြိုက်ဘူး။ ဓါတ်ဆီ နံလိုလို ဘာလိုလို ထင်တာပဲ.. အနံကြီးက… တချို့က ဓါတ်ဆီ အနံကို မွေးတယ် ဆိုပြီး သဘောကျတဲ့ လူ ရှိတယ်လို့တော့ ကြားဖူးတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ တစ်ချို့ တစ်ချို့သော အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်
နောက်ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာလည်း ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဒီကိစ္စနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလည်းရှိခဲ့ပါတယ် ..
အချိန်မရသေးတာမို့ နောက်မှ ရှင်းပြပါဦးမယ် ….
ကော်ဗူးတွေရှုတယ်။ဟယ် ဘယ်လိုကြီးပါလိမ့်။အရင်ကကြားဖူးတာကတော့ ဓါတ်ဆီနံရှုတယ်လို့ တော့ကြားဖူးပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေ အတွက်တိကျတဲ့ ဥပဒေတရပ်ရှိသင့်ပါပီ။အစိုးရမှာ တာဝန်အပြည့်ရှိ၊ယူလဲယူသင့်ပါတယ်။မသိကျိုးကျွံ့ မပြ.ုသင့်တော့ပါဘူးး။
“ကျန်တော်တို့က နေစရာမရှိ စားစရာမရှိတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က နှိမ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို အစ်ကိုကြီး တယောက်က ဒီကော်ကိုရှုရင် ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်သွားပြီး လုပ်ချင်ရာ လုပ်နိုင်တယ်လို့ ပြောလို့ရှုတာပါ။ ကျန်တာတော့ မသိဘူး” ဟု သူတို့ လေးတွေ စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်က စိုးရိမ်စရာပါ။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတို့ ၊ကလေးသူငယ်ပြုပြင်ရေးတွေ ထူထောင်သင့်ပါပီ။
အဲ့ ဒါ တွေ လားရှိုး မြို့ မှာ ခတ်စားသွားသေးတယ်။ ၁၈ နှစ်အောက် ကလေး တွေကို အဲ့ လို ကော်ဗူးတွေ မရောင်း ရဘူးလို့ တောင်အမိန့် ထုတ်ထားသေးတယ်။အဲ့ တာတွေ ကြာကြာရှု ရင်မကောင်းဘူး။